Lufthansa waxay soo bandhigaysaa xalka IT-ga ee socdaalka joogtada ah iyo soo-jeedinta dhaqdhaqaaqa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Lufthansa waxay soo bandhigaysaa xalka IT-ga ee socdaalka joogtada ah iyo soo-jeedinta dhaqdhaqaaqa
Iyada oo loo yaqaan 'Squake', qaybta Luithansa Group ee unugyada dijitaalka ayaa soo saareysa mashruuc magdhaw CO2 ah oo loogu talagalay shirkadaha ka socda dhammaan safarka, dhaqdhaqaaqa, iyo warshadaha gaadiidka.
Xalka cusub ee IT-ga wuxuu u saamaxayaa shirkadaha inay dhexgalaan dalabyo waara oo loogu talagalay macaamiisha galka wax soo saarkooda.
Mashruucu wuxuu taageerayaa gaaritaanka bartilmaameedyada dhimista CO2 iyo dardargelinta u-guurista dhaqdhaqaaqa waara.
Shirkaduhu waxay si fudud ugu dhex dari karaan iskuxidhka 'Squake interface' bogaggooda internetka.
Macaamiisha ayaa si sii kordheysa u dalbanaya safar joogto ah iyo dalabyo dhaqdhaqaaq. Isla mar ahaantaana, shirkaduhu sidoo kale waxay raadinayaan siyaabo ay ku gaaraan himilooyinkooda joogtaynta. Xarunta Hal-abuurka ee Lufthansa ayaa hadda wax ka qabata dalabkan sii kordhaya ee xal cusub leh.
Iyada oo isku jir ah, ka Kooxda LufthansaQeybta dhexe ee dijitaalka ayaa bilaawday mashruuc magdhaw CO2 ah oo loogu talagalay shirkadaha ka imanaya dhamaan safarka, dhaqdhaqaaqa, iyo warshadaha gaadiidka. Adoo adeegsanaya barnaamijyada barnaamijka (API) shirkadaha ayaa hadda si fudud u xisaabin kara oo dheellitiri kara qiiqa CO2 ee adeegyada ay bixiyaan. Xalka cusub ayaa u oggolaanaya iyaga inay horumariyaan alaab shaqsiyeed waarta oo si ku habboon ugu habboon baahiyaha macaamiishooda.
“Suuqa safarka iyo dhaqdhaqaaqa wuxuu si deg deg ah u raadinayaa xalal wax ku ool ah oo lagu kordhinayo joogtaynta. Jawaabteena tan waa cimilada bilaabista tikniyoolajiyadda cimilada, taas oo ka caawinaysa shirkadaha inay dardargeliyaan horumarkooda wax soo saarka joogtada ah, ”ayay tiri Christine Wang, oo ah Agaasimaha Maamulka Lufthansa Innovation Hub. Marka la eego 'Squake', waxaan awood u leenahay khibradeena dejisan ee laga heli karo meel ka baxsan duulimaadka. Waxaa kaliya oo suurtagal ah in lagu gaaro waaritaanka mustaqbalka fog haddii aan wada shaqeyno, taas oo ah sababta aan ugu tiirsanahay iskaashiga suuqa dhexdiisa iyo shirkadaha ka qaybgalaya. Aragtidayada ku aaddan Isku-dhafka ayaa ah inay bixin doonto 'laf-dhabar teknolojiyad cagaaran' oo loogu talagalay safarka iyo socodka
Waa tan sida ay 'Squake' u shaqeyso
Marka macaamiisha wakaaladda socdaalka ee internetka (OTA) ay ballansadaan safar iyagoo adeegsanaya habab kala duwan oo gaadiid ah, tusaale baabuur kiro ah, duulimaad, doon, bas, madalku wuxuu si otomaatig ah u xisaabiyaa qiiqa CO2 ee safarka oo dhan. Macaamiisha ayaa markaa dheellitiri kara qiiqa la xisaabiyay inta lagu jiro hawsha ballansashada.
Shirkaduhu waxay si fudud ugu dhex dari karaan iskuxidhka 'Squake interface' bogaggooda internetka. Tani waxay ka dhigan tahay inay isla markiiba bixin karaan “qiimayaasha cagaaran” ama ay ka dhigi karaan wax walba oo ay ku bixinayaan CO2 dhexdhexaad. Bilaabashadii ugu horreysay ee reer Yurub ee ka imanaya maaraynta safarka, dhaqdhaqaaqa la wadaago, iyo qaybaha saadka ayaa durba si guul leh u adeegsanaya adeegga.
"Faa'iidada iyo joogtayntu waa inay wada shaqeeyaan," ayuu yidhi Dan Kreibich, oo ah hoggaamiyaha mashruuca ee 'Squake'. “Waxaan ka caawinnaa shirkadaha inay la yimaadaan waxqabadyo waara waqtiga ugu yar ee suurtagalka ah ee sida saxda ah loogu talagalay kooxaha ay bartilmaameedsanayaan. Waxaan ku qanacsanahay in badeecooyinka waara ay gacan ka geystaan ​​kobaca iibka. ”